“Mayɛ Akyekyedeɛ​​—Mede Me Fie Nam” | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
“Mayɛ Akyekyedeɛ—Mede Me Fie Nam”
NÁ ƐYƐ afe 1929, August ne September mu. Adansefo bɛboro 10,000 too wɔn ho guu United States mmɔnten so wurawuraa tokuru biara mu dii adanse nnankron. Wɔmaa nhoma ne nhomawa bɛyɛ 250,000. Ná akwampaefo bɛyɛ apem ka Adansefo no ho. Wo deɛ hwɛ, efi 1927 kosi 1929 no na akwampaefo no dodow abu abɔ ho mprɛnsa! Bulletin * a ɛbae kae sɛ na “ɛyɛ nwonwa paa.”
Afe 1929 rekɔ awiei no, ɔman no sikasɛm gye gui. Ná October 29, 1929 yɛ Benada. Saa da no esum duruu ɔman no. Nnwuma akɛse akɛse dwetiri hyewee, sikakorabea pii bɔɔ fam, na eyi maa wiase sikasɛm sɛee. Akuafo de wɔn nnade guu hɔ. Nnwuma pii gui maa nnipa mpempem nnwuma fii wɔn nsa. Ná nnipa ntumi ntua bosea a wɔabɔ, enti afe 1933 mu no, daa na wotu nnipa bɛyɛ 1,000 fi wɔn afie mu wɔ United States.
Ɛyɛɛ dɛn na bere nyinaa asomfo no hwɛɛ wɔn ho wɔ ahohia bere yi mu? Ade biako a etwitwa gyee wɔn ne sɛ wɔde kar yɛɛ fie. Eyi deɛ, ɛdan ka ne towtua biara nnim. Kar a ɛte saa boaa akwampaefo pii ma wotumi yɛɛ asɛnka adwuma no. Sɛ nhyiam du so a, na kar no adan hotɛl ama wɔn. Eyi nti na wɔmmɔ ka pii. * Bulletin bi a ɛbaa afe 1934 kyerɛɛ ɔkwan a anuanom betumi afa so anya ɔdan korokorowa bi atena mu. Na nneɛma te sɛ nsu, sutof, ne mpa a wɔbobɔw wom. Afei na nneɛma bi wom a ɛma ɔdan no mu yɛ hyew awɔwbere.
Saa bere no asɛmpakafo a wɔwɔ mmeae ahorow pii sisii adan sii kar so. Victor Blackwell kae sɛ, “Ná Noa nnim hyɛn yɛ, saa ara na na me nso minnim sɛnea yesi dan si kar so.” Nanso ɔyɛe ara.
Wɔde ofie-kar yi bi retwa nsu wɔ India; ɛyɛ osutɔbere
Ná Avery ne Lovenia Bristow wɔ ofie-kar yi bi. Avery kae sɛ, “Mayɛ Akyekyedeɛ—Mede Me Fie Nam.” Harvey ne Anne Conrow nso yɛ akwampaefo a na wɔwɔ ofie-kar yi bi, wɔn deɛ no deɛ na wɔde nkrataa afomfam mu. Enti bere biara a wobetu kar no na nkrataa no rewawae. Saa awarefo yi ne Avery ne Lovenia Bristow boom yɛɛ akwampae adwuma no. Avery kae sɛ, “Obiara nhuu ofie-kar yi sɛso da!” Nanso Avery toaa so sɛ: ‘Menam menam, minhuu abusua a wɔn ani gye sɛ Harvey ne Anne Conrow ne wɔn mma baanu no.’ Harvey Conrow kyerɛwee sɛ, “Biribiara nhia yɛn. Yehowa hwɛ yɛn; ne som ne yɛn nsiakyibaa.” Harvey ne ne yere Anne ne wɔn mma baanu no nyinaa kɔɔ Gilead Sukuu, na wɔma wɔkɔyɛɛ asɛmpatrɛwfo wɔ Peru.
Ná Giusto ne Vincenza Battaino nso yɛ akwampaefo. Bere a ɔbea no nyinsɛnee no, wosii dan sii wɔn kar so. Sɛ wohwɛ sɛnea na wɔte ntamadan mu na seesei wɔanya ofie-kar yi a, na ɛte sɛ nea wɔte hotɛl. Wɔwoo abeawa, na wɔtoaa asɛnka adwuma no so. Wɔkaa asɛmpa no kyerɛɛ Italifo a wɔte United States.
Nnipa pii tiee asɛmpa no, nanso ahiafo ne wɔn a wɔnyɛ adwuma gye yɛn nhoma a, na wonni sika a wɔde betua. Enti na wɔde nneɛma foforo na esi anan. Akwampaefo baanu kyerɛw nneɛma 64 a anigyefo de maa wɔn. Na ɛte sɛ “sotɔɔ bi mu nneɛma.”
Fred Anderson hyiaa okuafo bi a na ɔpɛ yɛn nhoma no bi, na ɔde ne maame ahwehwɛniwa bi tuaa ka. Owiei no ɔkɔɔ okuafo foforo hɔ, na na ɔpɛ yɛn nhoma no bi nanso ɔkae sɛ onni ahwehwɛniwa a ɔde bɛkan. Enti onua no de okuafo biako no ahwehwɛniwa no maa no, na otumi de kan nhoma no pɛpɛɛpɛ, na otuaa nhoma no ne ahwehwɛniwa no ka.
Herbert Abbott nso nam a, na nkokɔbuw si ne kar mu. Sɛ nkurɔfo gye nhoma a, ɛyɛ a wɔn nso ma no nkokɔ. Enti sɛ onya nkokɔ bɛyɛ abiɛsa anaa anan a, ɔde kɔ gua so kɔtɔn de tɔ pɛtro gu ne kar mu. Herbert kae sɛ: “Ɛtɔ da a na yɛn bɔtɔ mu awe, nanso ɛno ammu yɛn aba mu. Nea ehia ara ne sɛ yebenya pɛtro agu yɛn kar mu; nea aka deɛ yegyaw ma Yehowa.”
Yehowa nkurɔfo de animia ne gyidi paa na ɛyɛɛ asɛnka adwuma no wɔ ahohia bere mu. Da bi, ahum bi tui ma dua bu hwee Maxwell ne Emmy Lewis ofie-kar so ma emu paee tu. Pue a wopue fii kar no mu ne dua no bu a ebu bɔɔ so yɛ biako. Maxwell kyerɛwee sɛ: “Yehui sɛ ɛyɛ akwanhyia biara kɛkɛ; yɛamma ammu yɛn abam. Nokwasɛm ne sɛ yɛanna anwene ho da sɛ yebegyae adwuma no. Na adwuma pii wɔ hɔ, na na yɛasi yɛn bo sɛ yɛbɛyɛ.” Maxwell ne Emmy nnamfo sɔɔ wɔn asen ma wɔsan sii ofie-kar no bio.
Ɛnnɛ nneɛma mu ayɛ den, nanso yehu sɛ Yehowa Adansefo mpempem atu wɔn ho ama de anigye ne ahokeka reka asɛmpa no sɛnea anuanom yɛe tete no ara pɛ. Yɛasi yɛn bo sɛ yɛbɛyɛ asɛnka adwuma no sɛnea akwampaefo a wɔtenaa ase tete no yɛe no kosi sɛ Yehowa bɛka sɛ eye, ɔma yɛn amo.
^ nky. 3 Seesei yɛfrɛ no Yɛn Ahenni Som.
^ nky. 5 Saa bere no, na akwampaefo dodow no ara nyɛ adwuma, enti wogye asafo nhoma a na wɔtew bo no so ma wɔn. Sɛ wɔde kɔ asɛnka na nkurɔfo gye ma wɔn ntoboa a, na wɔanya biribi kakra atwitwa wɔn ho.